Kulankii Baarlamaanka ee su’aalaha lagu weydiin lahaa Ra’iisul Wasaaraha oo baaqday – STAR FM SOMALIA
Kulankii Baarlamaanka ee su’aalaha lagu weydiin lahaa Ra’iisul Wasaaraha oo baaqday
Waxaa maanta dib u dhac ku yimid kulan Baarlamaanka su’aalo ku weydiin lahaa Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, kadib markii Sabtidii la soo dhaafay uu Baarlamaanka hor-geeyay hanaanka doorashooyinka Soomaaliya.
Kulankan ayaa Ra’iisul Wasaaraha su’aalo laga weydiin lahaa qodobada hanaanka doorashooyinka ee 12-kii bishii hore ku heshiiyeen Madaxda Soomaalida, iyadoo qodobadaas ay ka soo baxayaan dhaliilo loo jeedinayo.
Dib u dhaca kulanka maanta ayaa yimid markii shaqaalaha dowladda la fasaxay muddo labo cisho ah, maadaama shalay ay ku beegneyd 1-da May oo ah maalinta shaqaalaha Adduunka.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka ayaa sheegay in dib u dhaca kulanka maanta ee su’aalaha lagu weydiin lahaa Ra’iisul Wasaaraha ay tahay, iyadoo shaqaalaha dowladda ay fasax yihiin, Baarlamaankana ay qeyb ka yihiin.
Baarlamaanka ayaa maalmaha soo socda ka doodi doona hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2016 ka dhacaya dalka, waxaana lagu wadaa in qodobada qaar wax ka bedel ku sameeyaan, maadaama uu awood siinayo Madaxda Maamul goboleedyada.
Gabadhii Somaliyeed ee isku gubtay Jazeerada Nauru oo la geeyay dalka Australia
Britain oo ciidamo horudhac ah u dirtay Soomaaliya